Sue Grafton anofa achitora pamwe naye iyo Z yeAlfabheti yeChipara. | Zvazvino Zvinyorwa
Sue Grafton anotora tsamba yekupedzisira yearufabheti kuenda nayo.
Sue Grafton akanzwa sekuuraya murume wake wekare pavakange vakatarisana mudare kuti vachengete mwanakomana wavo uye, izvo zvine hukasha zvakava nhoroondo yake yekutanga yematsotsi, A yeUpombwe (A kubva kuna Alibi mune yekutanga).
"Panzvimbo pekushandisa hupenyu hwangu mutirongo, ndakafunga chimwe chinhu chiri nani: kumuuraya mubhuku uye nekugamuchira mari yacho ..."
Grafton haana kungoendesa zvakadzama zvakashata manzwiro ayo kurambana kwake kwakamugadzirira nekunyora bhuku rakanaka kwazvo, asi nekusaziva akagadzira mukadzi wekutanga mutikitivha kuti aputse pfungwa dzevakadzi dzinoshandiswa kakawanda kusvika musi iwoyo.
Kinsey mihone Kwakave kushanduka mumhando iyi: Mukadzi wekutanga, kupfuura Agatha Christie's Miss Marple, uyo anotora protagonism uye nemhosva yakaoma yerudzi rwemhando, "mutikitivha" sekudaidzwa kwaiitwa naGrafton. Kinsey haasi musikana wemutikitivha, haasi iye akabatwa, haasi iye mubatsiri, ndiye anotarisana nevarume vakaipa uye anogadzirisa nyaya dzakaomesesa.
Yakanga isiri iyo chinangwa chaSue Grafton kuti iye akange asati amboda kuisa chero zvemagariro zvirevo mumanovel ake uye izvo zvinoita kuti Kinsey awedzere kusarudzika. Zviri zvechisikigo, ichokwadi uye senge chero hunhu hwakavakwa zvakanaka hunoitika sevanhu chaivo: vamwe vanozvifarira uye vamwe havazvifarire.
Kinsey anopona pahudiki hwakaoma, husina hanya nekuda kwekufa kwevabereki vake aine makore mashanu chete. Tete vake vakamupa zvese zvaaida kuti akure uye kwete iota yerudo. Pazera remakore makumi matatu nemaviri, apo nhevedzano ye Arufabheti yeUtsotsiIye muongorori akazvimirira, mumwe weavo matikitivha anobata nyaya dzinofinha uye dzehutongi, kudzamara nyaya yawedzera kuomarara kupfuura zvakajairwa uye saga inotanga. Iye anogara muCalifornia, muSanta Teresa (achiyeuchidza Santa Bárbara, nzvimbo yaSue Grafton yekugara, sekurangarira kunoita Vetusta Oviedo muRegenta de Clarín), akangwara uye anoshanda nesimba, mutambi uye nyanzvi yekuzvidzivirira. Pakati paA de Alibi uye Y de Zuro, makore makumi maviri nemashanu apfuura, asi Kinsey Milhone haasati akura uye anoenderera mberi neruzivo mushure mekufungidzirwa kuve akasindimara, anoshingirira, ane hasha senge mune yake yekutanga kesi. Muhupenyu hwaKinsey hapana mumwe akatsiga mudiwa, asi haasi ega: Pakati pemakumi maviri neshanu kusvetuka mune yake chaiyo alfabheti anofambidzana naRosie, shamwari yake uye muridzi weresitorendi, nekuda kwekuti Kinsey anodya chimwe chinhu kunze kwekukurumidza chikafu, chakaperekedzwa negirazi rake risingaparadzanisiki reChardonnay naHenry, muridzi wekare anodakadza wemba yaanogara yekurenda.
A yeUpombwe haina kungobatsira chete Sue Grafton kukurira nguva yake yakaipa, asi zvakare akatanga saga yakakura uye yakabudirira inoenderera neB neB yezvikara (B yeBulglar mune yekutanga) kusvika iyo Uye kubva Nezuro, yakaburitswa muna 2017 uye iyo isati yashandurwa muchiSpanish.
"Munyori weCalifornia ane basa rinopfuura mwero weunyanzvi hwekunyora." Ross McDonald Literary Mubairo
A yeUpombwe: Kutanga kweAlfabheti yeUtsotsi
Izvo zvakakodzera kuti uverenge zvekare iyi yakanakisa Alphabet iyo iri kushaya yayo yekupedzisira tsamba uye wozopedzisa nebhuku renyaya Kinsey neni, apo munyori aive neushingi hwekuwana hupenyu hwake pamberi pevaverengi vake uye kutitaurira kuti yakawanda sei Kinsey yaive girazi raSue, rakakurira mumusha une vabereki vaviri vakadhakwa.
Kinsey haizombozviita kune hombe skrini. Munyori waro, akatanga basa rake semunyori, achishanda, pakati pevamwe, pamusoro pekushandurwa kwemabhuku eAgatha Christie, Sparkling Cyanide uye Chakavanzika muCaribbean, aigara achiramba kubvumira Kinsey kushanda kuHollywood. Akafunga kuti kana akaisiya mumaoko evanyori vetsitsi pane tsitsi yemubhadharo wevakuru vemabhizimusi emafirimu, aizorega kuve zvaari, vaizozviparadza, uye akatotya nekuenderera kwayo: Akazviita. asingade kuisa panjodzi yekuti kumeso kwemutambi akamumiririra akapinda mumusoro wake panguva yekunyora. Kurambidzwa uku kunopfuura sechikamu chenhaka kuvana vake uye mwanasikana wake akazvirangarira mushure mekufa kwake.
Sue Grafton, wekuAmerica, akaberekerwa muKentucky muna 1940, aine degree muChirungu Literature uye akahwina mibairo yakakosha yezvinyorwa, akationekana nesu muna Zvita 2017 mushure mezvikamu makumi maviri neshanu zvesaga, pasina yekupedzisira yaakange aronga. kutsikisa mu25. Sue inotora Z kwaari uye kunyangwe, tichamusuwa, anogara aine nzvimbo yekuremekedzwa muzvitoro zvedu zvemabhuku uye mumoyo medu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Sue Grafton's Nherera Z